Xildhibaan Cabdifataax: Kala-bar Xukuumaddii baarlamaanku ansixiyay waa la bedelay – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdifataax: Kala-bar Xukuumaddii baarlamaanku ansixiyay waa la bedelay
Xildhibaan Cabdifataax Ismaaciil Daahir oo ka tirsan Golaha shacabka BFS ayaa ku duray xukuumadda Ra’isal wasaare Xasan Cali Khayre ee hadda jirtaa in aysan sharciyad ku dhisnayn. Wuxuu arrintaas u cuskaday isbedelka badan ee xukuumada ka dhacay labadii sano ee ay jirtay.
“Golahii wasiiradda ee sharciga ahaa ee uu baarlamaanka ansixiyay intooda badan waa la badelay,” ayuu yiri Xildhibaan Cabdifitaax.
Wuxuu sheegay in 50% wasiiradda hadda xafiiska jooga ay yihiin kuwa aanan kalsooni ka haysan golaha shacabka ee baarlamanka federaalka ah ee Soomaaliya. Xildhibaanku ma uusan cuskan hadii ay jiraan qodobo dastuuri ah oo xukuumadda ka dhigaya sharci-daro marka ay sidani dhacdo.
Xildhibaan Cabdifitaax ayaa sheegay in golahaas aan sharciyadda ku dhisnayn, sida uu yiri ay kasoo gudbeen shuruuc ka hor imaanaya Dastuurka federaalka ah ee Soomaaliya
“Sharciga Doorashooyinka dalka ee ay meel mariyeen Golaha wasiirada waa mid ka hor imaanaya Dastuurka,” ayuu yiri. Sharcigaas ayaa waxa uu hada horyaalaa Golaha Shacabka wuxuuna maray akhrinta koowaad.
Docda kale, wuxuu xildhibaan Cabdifataax sheegay in aysan wasiiraddu u madax-bannaanayn shaqooyinka ay u igman yihiin, isagoo xusay in ay u guul-wadeeyaan ra’isal wasaaraha waa sida uu yiriye.
“Waa guul wadayaal Ra’iisul-Wasaaraha ayaana shaqada u meeriya” ayuu yiri Xildhibaanku. Xildhibaanka oo arrintaas ku dheeraaday ayaa wasiiradda aan shaqadooda u madax-bannaanayn ugu baaqay in ay is casilaan.
Xildhibaan Jeesow: Waan uga digay hay’adaha amniga weerarka goobaha gaadiidka lagu baaro
Sanatar Cabdi Qaybdiid: 15 Cutub ee dastuurka ayaa la qabyo-tiray